कलकलाउँदाे उमेरमा अञ्जनाको जिन्दगी ब’र्बा’द, आँ’शु झा’र्दै कापीमा लेखेर यस्तो पिडा सुनाईन मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो सहित) – Online Nepal Site
कैलालीमा बेहुला बेहुली सहितको जन्ती सवार गाडी दुर्घटना
पौडेल पक्राउ प्रकरण: यस्तो छ तनहुँका सिडियोको बयान…
सर्पले काँचुली किन फेर्छ ? सत्य थाहाँ पाउँदा होस उड्नेछ !
मुख्य पृष्ठ /Video/कलकलाउँदाे उमेरमा अञ्जनाको जिन्दगी ब’र्बा’द, आँ’शु झा’र्दै कापीमा लेखेर यस्तो पिडा सुनाईन मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो सहित)
काठमाडौ । अञ्जना गुरुगले भोगेको कथा कुनै फिल्ममा देखिने कथा भन्दा कम छैन । अन्धविश्वासका कारण अहिले अञ्जनाको जिवन नै बर्बाद भएको छ । उपचारका लागि लामा र झाँक्रिको भर पर्दा एउटी युवतीको जिवन वर्वाद भएको छ । रुपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका ठूलो चौर ७ मा यि युवतीको अहिले जिवन निकै फरक भएको छ । बोल्न सक्दिनन्, सबै कुरा देख्न र सुन्न सक्छिन् त्यसैले कसैले उनका बारेमा प्रश्न गरेपछि उनी आँशु झार्छिन । उनलाई निकै गाह्रो हुन्छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
दुई वर्ष अघि मंसिर देखि उनलाई यस्तो समस्या भएको हो । बेलाबेलामा आवाज निकाल्न नसक्ने र शरिर पनि नचल्ने समस्या थियो । तर फेरी कहिले काँही सबै ठिकै हुन्यो । यस्तो अवस्थामा उनलाई अस्पताल नलगेर धामी झाँक्रीको मा उपचारका लागि लगेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
आर्थिक अभावले राम्रो उपचार गराउन नपाएका कारण अहिले उनको शरिर नचल्ने भनएको छ भने आवाज पनि आउँदैन । त्यसैले उनले मिडियामा सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । छोरीलाई बोली बन्द भएर चल्न पनि नसक्ने भएपछि आफुलाई अस्पताल लैजानुपर्छ भन्ने आफुलाई ध्यान नै नभएको बताइन् । उपचारका लागि भनेर पोखरा लगियो, भारतका विभिन्न शहरमा पनि लगियो तर अस्पतालमा भने लगिएन । उनलाई देउता लागेर यस्तो भएको हो भनेर विश्वास दिलाएपछि धामीकै विश्वास परेको बताइन् ।
अरु विवाहित छोरीहरुले पनि अस्पताल लैजानु भनेर भनेनन् । सबैले धामीकै घरमा लिएर गए । अरु छोराछोरीले अञ्जनाको उपचारमा धेरै चासो नदिएका कारण अहिले उनको यस्तो अवस्था भएको आमाको गुनासो छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
मध्यरातमा अलिशा गौतम लाइभ आएर आ-त्म हत्या गर्नुको कारण, दिदीले यस्तो भनिन (हेर्नुहोस भिडियो)
सूस्माको भाईले झूट बोलेको यती ठूलो प्रमाण भेटीयो गाउनै यसरी मिलेर मा*रेछन नबराजलाई (हेर्नुहोस भिडियो)
गंगाको श्रीमान पहिलोपटक मिडियामा, भतिजा र श्रीमतीको बारेमा गरे यस्तो निर्णय (भिडियो हेर्नुस्)